Garden Apple - ibhizinisi noma wokuzilibazisa?
Kuhle yokuchitha isizungu - ukutshala yimuphi umhlaba kwezitshalo. Noma ngabe engadini noma ingadi yemifino entwasahlobo, ihlobo noma ekwindla lapho uthatha balimi ikhanda. Njengoba Bathi, iminyaka yobudala bomuntu ngokwethukela bakhangwa umhlaba, futhi lokhu kuyiqiniso, ngoba kunzima ukuthola umuntu phezu engamashumi amane kungekho isifiso ukubeka okungenani unesitshalo.
Apple Garden iyindawo ozithandayo nesokuphumula futhi umqondo omuhle ibhizinisi ngaphandle ukutshalwa kwezimali ezinkulu imali. Nokho-ke kumelwe libe sesilinganisweni esikahle ukuze umhlaba futhi bachithe isikhathi ezihlahleni nokunakekela inhlabathi.
amasu ukubekwa apula
Lapho ukutshala izihlahla akufanele nje mindlessly ukutshala izithombo ngendlela kunezinxushunxushu futhi acabangele izimo zezulu, apula izinhlobo, inhlobo yomhlabathi ebesingesihle. Kunezinhlobo eziningana isihlahla ukutshala:
Kunezinhlobo ezahlukene apula izihlahla ngesikhathi yokuvuthwa, isibonelo, uma kuwukuthi i-apula ekuseni, siveze izithelo kusuka 10,06 kuze 01,07, uma ihlobo apula esihlahleni, kusukela 01,07 at 10,08, ngasekupheleni noma ekwindla izinhlobo akhiqiza izithelo kusuka 10,08 at 10,09, futhi, ekugcineni, apula ebusika ingalandwa 10,09 at 20,10.
Ngaphambi kokuba atshale kubalulekile ukumaka izindawo lapho kuyoba nezihlahla. Ngamunye wabo udinga isikhala. Ibanga phakathi kwezihlahla Kumelwe kungabi ngaphansi kuka 5.4 m izakhiwo kanye outhouses, hhayi ngaphansi kuka 5.6 m phakathi imigqa. Nokho, uma nokubekwa apula engadini yezithelo okuhlangana ngayo nezihlahla, ezifana currants noma gooseberries. Ngenxa yaleli isisombululo kungenzeka futhi ukwandisa kwabantu Stocking, futhi ushiye isikhala esiningi ukuze yilowo nalowo muthi.
Tshala apula engadini kungaba kokubili entwasahlobo and ekwindla. Izimbobo izithombo kufanele kwenziwe ezinsukwini ezingu-15 ngaphambi kokutshala. Ubukhulu emgodini :. Ukujula - 50 cm, ububanzi nobude - 70-80 cm Phakathi kucedvwa izithombo zonke izinsuku 20-25 of ukuthambisa kumele kwenziwe nge ziba ngcono kancane umhlaba, ukuchelela ngokwanele 2-3.
Ngaphansi yezithelo baqonde khona izihlahla zezithelo kanye berry sezihlahla. Ngisho esizeni ajwayelekile 6 amahektare amaningi endawo le engadini kuyoba wangempela umhlobiso kanye entwasahlobo yokuqhuma futhi inuka izohambisa crazy. Kungaba ukusebenzisa le izihlahla: amagonandoda, apula, cherries kanye cherry emnandi, amabhilikosi, amapetshisi. Futhi iyiphi nezihlahla berry: ama-raspberry, currants omnyama abomvu, aluhlaza okwesibhakabhaka, gooseberries.
Kufanele ukhethe nezihlahla ezikhathini ezahlukene yokuvuthwa ke isithelo ziyojabula round ehlobo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi labo abasebunzimeni izivande ngebhizinisi uhlela ukuthengisa izithelo izithelo.
Uma ufuna abe ingadi kuleli zwe bese ukhetha ukuthenga umhlaba, cabanga kokukhokha engadini ngokuhlanganyela. Land kuyoba yini ibiza kangaka, futhi izingxenye ezibekwe, ngokuvamile indawo evumayo yokutshala izihlahla zezithelo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlangabezana lapho abantu abanezifiso ezifanayo futhi ufunde kuzo ulwazi oludingekayo ku ukubekwa nokunakekela izihlahla.
Garden Apple - ngabe ibhizinisi inzuzo?
Uma unquma ukuba nebhizinisi horticultural, nikwenzile kahle. Futhi kungcono ukuqala nge-apula, ngobe kunika isivuno esikhulu. Garden Apple ayidingi isikhathi eside kodwa ezuzisayo. Ukusaphaza imali okokuqala, isibonelo, ngo-2016, futhi ukuthenga izinhlobo ezehlukene apula, ngonyaka angasuswa kusukela esihlahleni ngamunye apula 10, e-2018 uzoba 20 t / ha apula, futhi ngemva konyaka, lesi sibalo luyokhula cishe kabili.
Ukukhetha engadini lapho khula shanguzo ahlukahlukene izithelo, kubalulekile ukuba acabangele ukuthi isivuno ibhilikotsi kanye ipheya kancane Nokho, izithelo ezibizayo. Kodwa kukhona ngikhetha ngokweqile, kufanele igcinwe endaweni ekhethekile bese uyiswa kahle.
I emikhulu engadini, kulapho imali yakhe, ngoba kulesi simo, ama-apula kanye nezinye izithelo lingathengiswa hhayi eyabo, futhi isivumelwano futhi ziyise ukucutshungulwa zezimboni (indlela elula), kanye ingxenye isitokwe futhi adayise ebusika ngaphambi onyakeni omusha.
Umndeni Rosaceae. incazelo
Growing horseradish ekhaya: incazelo kanye Ukunakekela
Hydrogen fluoride: izici futhi izicelo
USD: onjani lwemali, indima yayo ekukhuleni komnotho wezwe
Amakhekhe amakhomikhali ensimu. Ukupheka kanye namathiphu.
Izandla Kungani ezomile? Izimbangela kanye nezixazululo of isikhumba esomile yezandla
Izibuyekezo abanikazi Luxgen 7 Suv. Ukuhlolwa Imininingwane
Qhathanisa izixazululo unqulo wesi arab: ukhethe enokwethenjelwa kakhulu. Qhathanisa antivirus yenkampani